2017 octobre | Radio Agape
26 octobre 2017 Non classé
Tahaka ny mpihazakazaka hoy i Paoly ny fanompoana an’Andriamanitra. Eo amin’ny tany fihazakazahana hoy izy no hanaovana izany ary misy loka raisin’ny mpandray anjara.
Eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra manko dia misy tokoa ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony. Fil 3. 14. Ary nambarany tamin’izany fa ny mpihazakazaka rehetra dia mila mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra… Ary tsy tokony hanao kitoatoa. Tokony hihazakazaka amin’ny faharetana ihany koa ny mpihazakazaka . Heb 12. 2.
Raha te-hahazo loka ary ianaodia tokony hampiarinao ireo fe-petra takiana amin’ny mpihazakazaka ireo. Ny Apostoly Paoly izay nampahery antsika tamin’ny alalan’ireo teny ireo, izay efa niainany rahateo dia nanambara fa nahazo izany loka izany. Hoy ny II Tim 4 : 7-8 « Efa niady ny ady tsara aho ; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; hatr’izao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo Mpitsara marina, ho ahy amin’nizay andro izay ; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa. »
Ity misy fanoharana kely mikasika ny tsy fananan’ny mpifaninana mihazakazaka sasantsasany fahononantena.
Indra andro nisy fifaninanan hazakazaka izay hahazoana loka . Ny mpifaninana tamin’izany dia ny saka, alika, bitro, ary ny sokatra. Hoy angamba ianao hoe tsy lasan’ny alika sy ny saka ve ny loka ? Very lavitra ny sokatra ary aleo tonga dia tsy miheritreritra ahazo ny loka.
Nifanohitra tanteraka amin’izy heritreritrao izay anefa ny nitranga. Marihina etoana fa ireo biby ireo dia samy manana ny tompony izay nikarakara azy avy. rehefa voavinavinana’ny tompon’ny sokatra ary fa tsy afaka handresy iretsy biby telo faingam-pandeha iretsy velively ny sokatra dia nahita teti-dratsy izy mba hahazoan’ny siokatra ny fandresena. Lasa nakany an-tsena izy vka nividy taolana sy karaoty ary trondro satria fanatany tsara fa ireo no sakafo tsy ananan’iretsy biby hafa fahononan-tena. Avy eo dia lasa izy nitoetra teny an-tenantenan-dàlana manandrify ny hazakazaka.
Nanomboka ary ny hazakazaka. Avy dia niriotra mafy tsy nisy toy izany ny bitro, izay narahan’ny saka sy ny alika avy aoriana. Iny ary fa tsinjon’ny tompon’ny sokatra ilay bitro ka notsipazany karaoty. Revo nihinana karaoty ny bitro ka dia hadinony ny hazakazaka. Ireny koa fa tamy ny saka sy ny alika, notsipazan’ilay tompon’ny sokatra trondro anefa ny saka ary ilay alika kosa notsipazany taolana. Nilaozan’ireto farny ireto koa ny tany fihazakazahana satria fy ny taolana sy ny trondro ka revo izy ireo. Nandritra izany anefa dia nandroso tsy niato ny sokatra ka lasany mora foana ny fandresena.
Ry rahalahy sy anabavy, aoka isika hitandrina amin’ny izao hazakazaka filokana napetraka eo anoloantsika izao. Fantaro fa ny devoly dia mamandrika antsika ny amin’ny zavatry ny nofo izay tiantsika, dia izay tsy ananan-tsika fahononan-tena. Noho izany dia tohizo hatrany ny hazakazaka mandra-pahatonga anao any amin’ny tanjona farany , ary aoka ianao hijery an’i JESOSY KRISTY Tompon’ny finoantsika izay efa tonga any an-danitra. Heb 12 : 1-2 » Ko amin’izany , satria misy vavolom-belona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika , ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka ao anoloantsika izao, mijery an’i JESOSY TOmpn’ny finoantsika sy Mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny aankavanan’ny seza fiandrianan’ Andriamanitra Izy ».
Pastera Jean de Dieu. R
Marka 16 : 15
Ary hoy IZY taminy : Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. AMEN
ASAN’ANDRIAMANITRA TANY LIBANONA
NY FAHATERAHANA INDRAY
Powered by WordPress | Theme Designed by: hghinjections.co | Thanks to r4 nintendo dsi, click here and r4 dsi